Ndị okenye - princetoncovid.org
Nchịkọta obodo na ọba akwụkwọ nke Princeton, Obodo nke Princeton na Schoolslọ Akwụkwọ Ọha na Princeton. Ozi nyocha. Ebe ndị a tụkwasịrị obi.
Mmelite kwa ụbọchị nke Mayor
Iwu & Ndụmọdụ Ugbu a
Izi ozi nke izizi
Y’oburu na aru ori
Nkuzi Ike Okike
Ndepụta nke Gịnị Na-emepe
Gịnị bụ Nkwenye Na-emeghe
Kwado Business Business
Tozọ iji Nyere Aka
Na-arụ ọrụ Site na Nweta Ihe Ntanetị
Virtual Events Submission
Ọrụ Okwukwe Dabere na Virtual
Azụmaahịa & Ọrụ
Maka Ulo oru
Onye were gị n'ọrụ / enweghị ọrụ
Online na-akwado otu
Nchekwa Maka Ndị Agaba - Mmemme na-ejikọ ndị agadi na nnyefe nri adịghị.
Virtual Ndị Enyi mmemme - PSRC na-enyocha ndị okenye Princeton site na ekwentị ma ọ bụ kamera weebụ.
Ndị agbata obi Buddy Initiative - Ndị ọrụ afọ ofufo adịla njikere inyere ụmụ amaala agadi Princeton aka. Ozi ndị ọzọ Ebe a. Iji jikota Buddy agbataobi ga-enyere gị aka, biko debanye aha gị Ebe a.
Virtual Fireside Chat - Bugharịa nzukọ ụbọchị ụka na elekere abụọ nke ehihie Dbido batara gị na ndị enyi ọhụụ site na kọmpụta, ama ma ọ bụ landline. Deba aha Ebe a.
Ọrụ ezinaụlọ ndị Juu na nke ofmụaka nke Ọrịa Mercer
Ekwentị “iji wee banye,” M, W, F, 609-987-8100, ext 0; mmemme nkwado siri ike mebere, 609-987-8100, ext. 117 ma ọ bụ email; Ndụmọdụ onye ọ bụla, ịnabata ọgwụ medicaid, ọgwụ ọgwụ, ndị mmadụ na - enweghị mkpuchi na ọtụtụ mkpuchi onwe onye (ego a na - akwụ ụgwọ n'oge nsogbu), 609-987-8100, wepụta 102. Tụfuo N’oge, Ndị Nkwado na Ọrụ Ndị Nke Ọ bụla dị na Spanish nwere ndị ndụmọdụ abụọ.
Ndị dọkịta ma ọ bụ ndị dibia ezumike nka ezumike nka chọrọ mkpa
Gọvanọ ahụ nyere iwu nchịkwa nke kwere ka ndị dọkịta lara ezumike nká ma ọ bụ ndị si mba ọzọ sonye na ọgụ megide COVID-19. Iwu a nyere ha mgbochi maka ọrụ obodo maka ezi okwukwe na ịnye nlekọta COVID-19. Ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike idebanye aha ha Ebe a. Ejighi mkpuchi n'okpuru iwu ahụ, mana achọrọkwa ụmụ akwụkwọ na afọ ikpeazụ nke ọmụmụ ọgwụ.
Hụ Ọtụtụ Masks Project
Council Arts nke Princeton na-akwado nkwado maka ndị otu ime obodo inye aka na-abawanye nso ebe a na-etinye akwa. Nwere ike wepụta onwe gị ịkpụ akwa, yana / ma ọ bụ ịsa akwa. Igwe eji emechi emechara emechara ghazie igba ndi a choro. More ọmụma
princetoncovid.org, Nganga kwadoro site na WordPress.